कसरी एक बोटनेट तपाईंको कम्प्युटर उपकरण संक्रमित गर्दछ? - Semalt
ओलिभर किंग, Semalt ग्राहक सफलता को प्रबन्धक, बोटनेट संक्रमण निजी कम्प्यूटरहरु बीच विशेष गरी चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका मा व्यापक हो भन्छन्। केही botnets मात्र केहि सय उपकरणहरु को छ, अरूहरु लाई दुनिया भर मा लाखौं मेसिनहरु मा घुमाउन सक्छन्। बोटनेट्सले शंकास्पद प्रोग्राम वा भाइरसहरू डाउनलोड गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई झुक्याउन र उनीहरूसँग सम्बद्ध लिंक वा भिडियोहरू क्लिक गर्न बाध्य पार्दछ जुन अधिक खतरनाक मालवेयरबाट संक्रमित हुन सक्छ। यसले त्यसपछि ट्रोजन हार्सको रूपमा कार्य गर्दछ र ह्याकरहरूलाई तपाईंको डाटा र निजी जानकारीमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। ह्याकरहरूले तपाइँको व्यक्तिगत कम्प्युटरको बिभिन्न कार्यहरू गर्न र अपराध, धोखाधडी, र अनलाइन दुर्व्यवहार गर्न प्रयोग गर्दछ।
केहि केसहरूमा तपाईको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरण बोटनेट वा मालवेयरद्वारा संक्रमित हुन सक्छ जुन तपाइँलाई प्रासंगिक फाईलहरू डाउनलोड गर्न र तपाइँको मनपर्ने वेबसाइट खोल्नबाट रोक्न सक्दैन। बोटनेट कम्प्युटरहरूको एक नेटवर्क हो जुन एक खास मालवेयर वा मालिसियस प्रोग्रामबाट संक्रमित छ। प्रणाली तेस्रो-पक्ष वा बाहिरी इकाई द्वारा नियन्त्रण गरिन्छ। मलाई यहाँ तपाईं बताउन दिनुहुन्छ कि बोटनेटको मास्टरहरूले तपाईंको कम्प्युटर क्रेडिट कार्ड जानकारी चोर्न, स्पाम ईमेलहरू पठाउन, विभिन्न साइटहरू विरुद्ध सेवा आक्रमणहरू गर्न, र ठूलो संख्यामा फिशिंग आक्रमणहरू प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्दछ।
मालवेयर संक्रमणहरू कसरी पत्ता लगाउने?
एन्टिभाइरस वा एन्टि-मालवेयर प्रोग्रामको साथ तपाईंको उपकरण स्क्यान गर्दा, तपाईंले पहिले सबै संक्रमणहरूलाई रोक्नु पर्छ। वास्तविकता यो हो कि धेरै जसो कार्यक्रमहरू कुनै चीजको लागि राम्रो हुँदैनन् र ठूलो संख्यामा ह्याक्सहरू र इन्टरनेट खतराको साथ राख्न सक्दैनन्। कहिलेकाँही, नराम्रो कुराको कोडहरू तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको ज्ञान बिना सम्मिलित गरिन्छ। यदि तपाईंसँग कम्प्युटर छ भने, तपाईंले नियमित रूपमा तपाईंको वेब ब्राउजर वा अपरेटिंग प्रणाली अपडेट गर्नुपर्दछ। यो एक मालिसिमल रिमूभल प्रोग्राम स्थापना गर्न राम्रो छ, धेरै जसो विशेषज्ञहरु द्वारा सिफारिस गरिएको विश्वव्यापी तिनीहरुका ग्राहकहरु लाई। यदि तपाईंको कम्प्युटरले बिस्तारै यसको कार्यहरू गर्दैछ भने, तपाईं बोटनेटको शिकार हुन सक्नुहुन्छ, र तपाईंको क्रेडिट कार्ड जानकारी चोरी भएको सम्भावना पनि छ।
कसरी बोटनेट संक्रमणहरू रोक्न सकिन्छ?
नियमित एन्टिमाल्वेयर र एन्टिभाइरस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै तपाईको सुरक्षा र सुरक्षा अनलाइन सुनिश्चित गर्न तपाईंले केहि कदमहरू चाल्नु पर्छ। तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको बलियो प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड छनौट गर्नु हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको गोपनीयता सेटि almostहरू लगभग दैनिक जाँच गर्नुहुन्छ र सेटि updateहरू हप्तामा एक वा दुई पटक अपडेट गर्नुहोस्। तपाईले फायरवालहरू बन्द गर्नु हुँदैन इन्टरनेट चलाउँदा र मनपर्ने वेबसाइटहरू जाँच गर्दा। विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि बोटनेटले सामान्य कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणलाई पाँच मिनेट भन्दा कममा संक्रमित गर्न सक्दछ। यसैले, तपाइँ वेब पृष्ठहरू र तपाइँले भ्रमण ब्लगहरूको बारेमा सावधान हुनुपर्छ। इन्टर्नेट प्रयोग गर्दा तपाईले कहिल्यै पनि अज्ञात लिंक र ईमेल संलग्नकमा क्लिक गर्नु हुँदैन, अज्ञात वा अवैध वेबसाइटहरूबाट सफ्टवेयर र अनुप्रयोगहरू डाउनलोड नगर्नुहोस्, र नियमित आधारमा तपाईंको उपकरण स्क्यान गर्नु हुँदैन।